Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Isbitaal Madiina ku booqday dadkii ku dhaawacmay Hotel Saxafi – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, oo shalay la wareegay Xilka ayaa maanta booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii Ururka Al Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho.
Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ay wehliyaan xubno ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dul tagay dadkii ku dhaawacmay weerarkii Hotel Saxafi oo qaarkood ay liitaan, waxaana Guddoomiyaha uu lacago u qaybiyay dadkaasi.
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ayaa lacag Shilin Somali ah u qaybiyay dhaawacyada, waxaana uu u rajeeyay inay si deg deg u caafimaadaan, isaga oo la qaybsaday murugada xanuunka dhaawacyada ay qabaan.
Maamulka Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho ayaa warbixin ka siiyay Guddoomiyaha xaalada dadka dhaawacyada ah.
Tirada dadkii dhaawaca ahaa ee la geeyay Isbitaal Madiina ayaa gaarayay 28 ruux, inkastoo dad kala duwan oo daryeel caafimaad loo sameeyay dib loogu celiyay guryahooda.
Tallaabada Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir uu maanta ku booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii Hotel Saxafi ayaa muujinaysa in Guddoomiyaha uu u nugul yahay Bulshadiisa.